सरकारले मलाई पुन जिम्मेवारी दिइए पछाडि हट्दिन – कुलमान घिसिङ – Khabar PatrikaNp
August 25, 2020 116
मेरो विचारमा कुनैपनि संस्थामा राइट मेन राइट प्लेस हुनुपर्छ भन्ने हो । जसका कारण पनि मलाई सफल मिल्यो भन्ने लाग्छ । सरकारबाट पनि सपोर्ट प्राप्त हुदै गयो जसका कारण मैले काठमाडौंलाई लोडसेडिङ्ग मुक्त बनाउन सफल भएंँ र क्रमश देशभर सबै ठाउंँ लोडसेडिङ्ग मुक्त गर्न सफल भयौं ।
त्यतिबेला हाम्रो उत्पादननै कम थियो । त्यतिबेला जम्मा ३५० मेघावाट उत्पादन पनि थिएन । अर्कोतिर माग पनि बढ्दै जाने अवस्था थियो ।
म आएलगत्तै पूर्वाधार निर्माणमा लाग्यौं । त्यतिबेला कैयो पावरप्लाण्ट बन्द थिए । यसलाई चालु गर्यौं । यहांँ उत्पादित विजुली सहीरुपमा उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाएका थिएनौ । चुहावट लगायतका थुप्रै आन्तरिक समस्यालाई छिचोल्नु पक्कै पनि चुनौतिको बिषय थियो ।
एक्कासी लोडसेडिङ्ग मुक्त गर्नसक्ने अवस्था थिएन । यसलाई क्रमश सुधार गर्नुपर्ने , सिष्टम कसरी विकास गर्दै जाने भन्ने मुख्य कुरा थियो । मेरो भिजन र अनवरत प्रयास मेहनतले गर्दा अहिले यो अवस्थामा आउन सफल भयौं । यहीं भएको रिसोर्सलाई व्यवस्थापनबाटनै अहिले लोडसेडिङ्ग सफल हुन सफल भएको हो ।
यसका लागि ट्रान्समिसन , सवमिसन लाई लगायतका कामहरु भइरहेको छ । धेरै जलविद्युतका स्रोतहरु निर्माणधीन र कतिपय उत्पादन दिने तयारीमा छन । यसकारण मैले एउटा सिष्टम मात्र बसालेको मात्र हो ।
यसमा मन्त्रालयका नीतिगत निर्णयदेखि प्राधिकरणका बिषयलाईने प्राथमिकतामा राखेर सफल भएको हो । मैले एउटा दायित्व निर्वाह गरे । यसको मुल्यांकन मैले भन्दा जनताले गर्ने हो । तर म यतिमा मात्र सिमीत छैन । सन्तुष्ट भएको छैन । अझै थुप्रै मेरा योजना पुरा हुननै बांँकी नै छन ।
यसमा आन्तरिक व्यवस्थापनले मात्र काम सम्पन्न हुन्नन । यसमा बाह्य विषयहरु पनि जोडिएका हुन्छ र मेरो कार्याकालमा धेरै मेहनत गर्दापनि अपर तामा कोशी ल्याउन सकिएन भएन । मैले सोचेर चाहँदा चाँहदै पनि सकिएन मेरो कार्याकालको ठूलो सपना थियो मेरो ड्रीम प्रोजेक्ट पुरा हुन् पाएन । तर कोभिडको कारणले पनि पर धकेलियो। अब यी प्रोजेक्टहरु अन्तिम चरणमा छन।
यति छोटो समयमा सबै शुर भएका आयोजना समयमै सकिन्छन भन्ने हुदैनन । विभिन्न समस्या चुनौति आइपर्छन । कतिपय ट्रान्समिसन लाइन विस्तारको चरणमा कतिपय मुद्धा मामिलाका कुरा स्थानीयको अवरोध , रुखविरुवा कटान गर्ने बिषय देखि लिएर समस्या छन ।
बिजली महसुल दर घटेको छ । अर्कोकुरा विद्युत स्टोरेज गर्ने सकिदैन त्यसकारण निर्यात गर्नैपर्छ । आत्म निर्भर बन्न निर्यात गर्नै पर्छ । त्यसैले खेर गएको विजुली प्रयोगमा ल्याउन पनि निर्यात अपरिहार्य हो ।
अधिकांश रातको समयमा विजुली प्रयोगमा आउंँदैन । यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन पनि निर्यात गर्न आवश्यक छ । अहिले हाम्रो पन्ध्रसय मेघावाट विद्युत निर्यात गर्न तयार भइसकेका छों । अब अटोमेटसन। डिजिटलाइजेसन सिष्टम भएपछि यस क्षेत्रले थप फड्को मार्नेछ ।
तर प्राधिकरणमा म जस्तै नेतृत्व क्षमता राख्नुहुने अन्य अधिकृतहरुपनि हुनुहुन्छ । जो आएपनि सिष्टम र व्यवस्थापनलाई फलो गर्ने हो । छोटो समयमा मैले चाहेका सबै काम पुरा हुन सकेनन भन्ने मलाई चिन्ता हो ।
ममा अझपनि विद्युतको क्षेत्रमा काम गर्ने उर्जा अझै मरेको छैन । यदि सरकारले चाह्यो र आवश्यक पर्यो भने मैले सरकारले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्छु । मेरा अधुरा योजना सम्पन्न गर्नेछु र छिटैनै देशलाई प्रशस्त विद्युत निर्यातका ढोका खोल्नेछु भन्ने लागेको छ । आखिर मैले चाहेर मात्रै हुदैन भोलिका कुरा के हुन्छ हेरौं ।
Prevश्री मनकामना माताले हामी सबैको रक्ष्या गरुन हेर्नुहोस्आज २०७७ भदौ ९ गते मंगलबारको राशिफल
Next२० हजार प्रवासी मजदूरलाई घर दिँदै अभिनेता सोनु….!
पुण्य गौतम खुला मञ्चमा पलेटी कसेर निशुल्क खाना खान बसेपछि…! (भिडियो हेर्नुस्)
रवि लामिछानेको आज जन्मदिन:बधाईको ओहिरो….!
मात्रै २ वटा ल्वाङ्ले तपाईको जिन्दगी बदल्न सक्छ…
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (33552)
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (33302)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (27266)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (25118)
नन्दा सिंह को आखा बाट अन्धकार हट्यो पहिलो चोटि संसार देख्दा खुसिले रोईन (भिडियो हेर्नुहोस) (20062)